हामी वाम गठबन्धनको अभिन्न अंग... :: भानुभक्त :: Setopati
हामी वाम गठबन्धनको अभिन्न अंग भइसक्यौ: त्रिपाठी
असोज १६ गते राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) नेपाल परित्याग गरी हृदयेश त्रिपाठीसहितका नेता/कार्यकर्ता स्वतन्त्र राजनीतिक समूह बनाए। यो समूहका चार नेताले एमालेको सूर्य चिन्हमा चुनाव लडे। तीमध्ये त्रिपाठी र बृजेशकुमार गुप्ताले जितेका छन्।
मधेस आन्दोलन, त्रिपाठीको एमाले प्रवेश लगायत विषयमा सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले त्रिपाठीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सूर्य चिन्हमा चुनाव जितेर आउनुभयो, अब तपाईं एमाले हो कि स्वतन्त्र सांसद हो?
हामी वाम गठबन्धनको एउटा अभिन्न अंग भइसकेका छौं। हाम्रो जित होस् या हाम्रो समर्थनमा पश्चिममा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारको केही जित होस। हामीले एकअर्कालाई सहयोग गरेका हौं। अब हामी वाम गठबन्धनका एक अभिन्न र अभिभाज्य अंग नै हो।
जब राजपाले अन्य प्रदशेको निर्वाचन बहिष्कार गर्यो हामीले पश्चिम तराईमा पनि निर्वाचन बहिष्कार गरेका थियौं।
नवलपरासीको एउटा बुथमा त दुई भोट मात्रै पनि खसेको थियो। तर राजपाले दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा भने भाग लियो। उहाँहरूले अवसरवाद देखाउनुभयो, दुई नम्बरबाहेक अरु मधेश नै होइन सोचेर जुन काम गर्नुभयो त्यो बेलादेखि नै हाम्रो मतान्तर सुरू भयो। अध्यक्ष मण्डलको कार्यशैलीले पश्चिमका नेता कार्यकर्ताले आफूलाई प्रयोग मात्रै गरेको अनुभुति गरे।
त्यसपछि हामीले स्वतन्त्र राजनीतिक समूह बनाएर असोज १६ गते २ बुँदे सहमति गर्यौं। त्यहीअनुसार सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लियौं। वाम गठबन्धन र हाम्रो समूहबीच एकअर्कालाई सघाउने सहमति भयो।
अहिले पनि हामी स्वतन्त्र राजनीतिक समूहमा छौं। यो समूह बढ्दो क्रममा छ। यसमा दुई नम्बर प्रदेशका धेरै नेता कार्यकर्ता संलग्न हुन चाहनुभएको छ। हामी केही समयसम्म स्वतन्त्र राजनीतिक समूहमा नै रहन्छौं। छुट्टै राजनीतिक दल निर्माण गर्ने कि भन्ने पनि छ। सम्भावनाका हिसाबले चुनावमै गठबन्धन भइसकेकाले एमालेसँग एकता हुनसक्छ।
यसका लागि सम्मानजनक परिस्थिति हुनपर्छ। यही सम्भावनाको बीचमा हामी छौं।
स्वतन्त्र भने पनि वैधानिक हिसाबले त तपार्इँ एमालेकै सांसद हो नि?
ठिक हो। वैधानिक रूपमा हामी एमालेकै सांसद देखिन्छौं। जसरी पहिला पद्मरत्न तुलाधर जे हुनुहुन्थ्यो, अहिले हामी पनि त्यस्तै हो। वैधानिक रूपमा तुलाधर एमाले भए पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो।
हामी राजनीतिक मान्छे हो, कानुनी मान्छे होइन। यथार्थ कुरा के हो भने हाम्रो जितमा एमाले–माओवादी नेता कार्यकर्ताको उत्तिकै योगदान छ, जति हाम्रा साथीहरूको छ। कतिपय ठाउँमा हाम्रा साथीहरूको पनि एमाले–माओवादीलाई जिताउन योगदान छ। राजनीतिक रूपमा हाम्रो सहमति भएअनुसार हामीले चिन्ह मात्रै लिएको हो। स्वतन्त्र राजनीतिक समूह नै अझै विस्तार हुँदै जान पनि सक्छ।
वाम गठबन्धनभित्रै रहेर स्वतन्त्र समूहको विस्तार गर्ने तपाईंहरूको योजना हो?
दुई नम्बर प्रदेशमा हाम्रो समूहप्रति आकर्षण बढेको छ। उनीहरू स्वतन्त्र राजनीतिक समूहमा आवद्ध हुन खोजिरहेका छन्। दुई नम्बर प्रदेशमा अभियान चलाइरहेका छौं। महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ता हाम्रो समूहमा आउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
औपचारिक रूपमा कहिले एमाले बन्नुहुन्छ?
अहिले नै भन्न सकिन्न। सबैको सल्लाह र सहमतिमा हामीअघि बढ्छौं। एमाले नेतृत्वसँग पनि छलफल गर्छौं। यदि हामी एमाले बन्ने परिस्थिति बन्यो भने त्यतिबेला अर्को चरणमा छलफल हुन्छ। तर अहिले हामी स्वतन्त्र समूह बनाउने अभियानमा छौं।
लामो समयसम्म मधेश आन्दोलनमा लाग्नुभयो। पछिल्लो समय मधेशविरोधी आरोप लागेको एमालेसँग सहकार्य गर्नुभयो। तपाईंलाई मधेशका एजेन्डा छोड्यो भन्ने आरोप छ नि?
हृदयेश त्रिपाठीलाई मधेशवाद सिकाउने यो धर्तीमा कोही छैन।म दोहोर्या‍एर भन्छु कि यो धर्तीमै कोही छैन। यो दम्भले भनेको होइन, व्यवहार र अभ्यासले भनेको हो। मधेशको मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दा बनाउने अभियानका साथ हामी अघि बढेका थियौं। क्षेत्रीय मुद्दाका लागि हामीले तीस वर्ष काम गर्‍यौं। त्यो मुद्दा स्थापित भयो। परिभाषित भयो तर सफल भएन।
अहिले स्थापित मुद्दालाई सफलतातिर लैजान जरुरी छ। जबसम्म यो देशको मुद्दा बन्दैन त्यतिबेलासम्म सफल हुने मैले देखेको छैन। दोष दुबैतिर छ। कथित रूपले राष्ट्रिय पार्टी भन्नेले पनि मधेशको मुद्दा मधेशको मात्रै हो भनेर ठान्दिने अनि मधेशका हामी नेता कार्यकर्ताले पनि यो त हाम्रो मुद्दा हो भनेर उठाइराख्ने हो भने समाधानतिर जानुको साटो आपसमा विग्रह गराउने अभ्यास भयो। दुबै अभ्यास गलत छ।
मेरो मान्यता के हो भने मधेशको मुद्दा अब देशको मुद्दा भइसक्यो। देशको भएपछि समाधानतर्फ जान्छ। त्यस्तै आदिवासी जनजातिका मुद्दा पनि छन्। जति पनि आन्दोलन भएका छन् सबै असन्तुष्टिकै कारण थिए।ती आन्दोलन अधिकारका लागि भएका थिए रमाइलोका लागि थिएनन्।
अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले मधेशका एजेन्डा सम्बोधन गर्ला त?
वाम गठबन्धनबाट यसको सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशाले नै हामी यसका हिस्सेदार भएका हौं। कांग्रेसलाई त हामीले पटक-पटक मौका दिइसकेका छौं। कांग्रेसले सधैँ कुरा गर्दा हामीभन्दा पनि बढी मधेशी भएर गर्दिने तर समाधान कहिले पनि नगर्ने।
दुर्भाग्य के भयो भने नेतृत्व सधैँ कांग्रेसकै भयो। यसले गर्दा हाम्रै भाषा बोलेर हाम्रा समस्या समाधान नगर्ने कांग्रेसको नियत हो भन्ने मेरो ठहर हो। वाम गठबन्धनले यी सबै समस्यालाई मिलेर समाधान गरौं भनेर विश्वास दिलाएको छ। यही भएर हामीले यो कदम चालेको हो।
सीमाकंनलगायतका जटिल मुद्दा छन्। यसमा तपार्इँ र एमाले नेतृत्वबीच त ठूलो भिन्नता छ नि?
सीमांकनको खाका सबैले आ–आफ्ना दिए। तर कोही पनि आफ्नो वास्तविक खाकामा रहन सकेन। कांग्रेस टिकेको भए एमालेले गल्ती गर्यो‍ भन्नहुन्थ्यो। माओवादी टिकेको भए पनि एमालेले गल्ती गर्यो‍ भन्नहुन्थ्यो। आफ्नो खाकामा कोही टिकेनन्।
संयुक्त रूपमा समितिमा कांग्रेस र एमालेले दिएको खाकाबाट दुबै पछाडि हटेका हुन्। पाँच नम्बर प्रदेशको आन्दोलनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी सँगै थिए। किन एकअर्कालाई बढी आरोप लगाउने?
सीमाकंनविरुद्ध भएको आन्दोलनको अनुहार हेर्यो‍ भने थाहा हुन्छ। त्यहाँ सबै दलको उत्तिकै हिस्सेदारी थियो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जुन सीमांकनको खाका ल्याएको थियो। त्यसविरुद्ध बुटवल लगायत क्षेत्रमा आन्दोलन भए। त्यो प्रस्ताव फिर्ता भयो। तत्कालीन सरकारले संयुक्त रूपमा फिर्ता लिएको हो।
बडो दुःखका साथ भन्छु—मधेशवादी दलको सहमतिमा त्यो फिर्ता भएको थियो। त्यो फिर्ता गर्न उहाँहरूले सहमति जनाउनु भएको थियो। किनभने त्यो फिर्ता हुँदा दुई नम्बरलाई केही असर परेको थिएन। उहाँहरू सबै दुई नम्बर प्रदेशका हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उहाँहरूकै सहमतिमा त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिएको हो। हामीबीचको असहमति त्यहीँबाट सुरु भएको हो।
राजपा–फोरम र तपार्इंबीच मधेश आन्दोलनलाई हेर्नेबारे सहमति हुन्छ कि फरक हुन्छ?
मधेसी, आदिवासी, जनजाति र दलितका जति मुद्दा छन् ती सशक्त छन्। यो विभेदको मुद्दा हो। विभेदको मुद्दा घर, समाज, देश र दुनियाँमै सशक्त हुन्छ। मुद्दामा दम छ तर जसरी लैजान खोजिएको थियो, त्यो गलत थियो। मैले जोखिम लिएको छु। यसमा दुई मत छैन। क्षेत्रीय स्तरबाट मात्रै लैजाँदा तीन दशकसम्म हामी मुद्दालाई स्थापित गर्न सफल भयौं तर समाधान गर्न सफल भएनौं। अहिले मैले जोखिम लिएको के हो भने वाम गठबन्धनले यी मुद्दालाई समाधान गर्ने वचन दिएको छ। त्यसैले हामी गठबन्धनको हिस्सा भएका छौं।
आन्दोलन कुनै पण्डित ज्योतिषबाट जोखना गराएर हुने कुरा होइन। परिस्थितिले सिर्जना गर्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ — अब बन्ने सरकारले एउटा नयाँ ढंगले विषयलाई परिभाषित गर्नेछ। यदि गरेन भने समग्रमा विफल हुनेछ। अहिलेकै संविधानमा समय अनुकुल संशोधन भएन भने यसलाई कसैले बचाउन सक्दैन। राजनीतिक स्थीरता पनि आउँदैन र संक्रमणकाल नयाँ स्वरूपले थपिन्छ।
अहिले जुन विवाद देखिएको छ। यो पार्टीबीचको विवाद होइन, यो संविधानले ल्याएको विवाद हो। यस्ता अनेकौं विवादको ठाउँ यो संविधानमा छ। यो सबै विषयलाई हेरेर जतिसक्दो छिटो संविधान संशोधन गर्दै अघि नबढ्ने हो भने संविधान धरापमा पर्ने र प्रणाली पनि धरापमा पर्ने स्थिति हुन्छ।
समयअनुकुल संशोधन हुनु पर्छ भनेको कसरी हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
जसरी हिजो संविधान जारी भयो। यसको परिभाषा अहिले फरक–फरक भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको सम्बन्धमा समानुपातिकको विषयमा जुन अस्पष्टता देखिएको छ। यो त संविधानले जन्माएको हो। यस्ता अस्पष्टता अनगिन्ति ठाउँमा छ। म त भन्छु ८८ ठाउँमा यस्ता अस्पष्टता छन्। जसले नेपाली राजनीतिलाई सहज ढंगले अघि बढ्न दिदैँन।
संविधान संशोधन गर्दै यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन मधेशीका लागि मात्रै भन्ने जुन मनोविज्ञान छ, त्यो रोग हो।जसले यस्तो मनोविज्ञान राखेका छन्, ती रोगी हुन्। यो संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न कठिन छ भन्ने बुझिएन भने यो संविधान धरापमा पर्छ जसरी २०४७ सालको संविधान धरापमा परेको थियो।
अब मधेश आन्दोलन कुन चरणमा प्रवेश गरेको छ?
मधेशको आन्दोलन अब देशको आन्दोलन भएको छ। मधेशको आन्दोलनलाई मधेशीको मात्रै आन्दोलन भन्ने हेराइले जुन असहिष्णुता परस्परमा बढेको थियो। त्यो परिवर्तन भएको छ। नयाँ हिसाबले जाँदा यो देशको आन्दोलन भएको छ। यो देशको समस्या हो। यसलाई समाधान नगरी देश अघि बढ्दैन भन्ने मान्यता यसले स्थापित गरेको छ।
वाम गठबन्धनको कोर्स अब कसरी अघि बढ्छ जस्तो लाग्छ?
निर्वाचनअघि जुन गठबन्धन बन्यो, त्यो नेपाली राजनीतिका लागि शुभ संकेत हो। निर्वाचनअघि जुन गठबन्धन बन्छ त्यसले साझा कार्यक्रम, साझा उम्मेदवार तय गर्छ र त्यो जनताबाट अनुमोदित हुन्छ। कार्यकर्ताको तहमा मेलमिलापको भावना बढाउँछ। दुई पार्टी एकताको वचनवद्धता निर्वाचनमा गएको छ। त्यसले वाम कार्यकर्तामा एउटा उत्साह आएको देखेको छु। कार्यकर्ताको मनासय एकतामा नै गएको छ। यसको मोडालिटी फरक हुनसक्छ तर जनअनुमोदित भइसकेको हुनाले चाँडै एकता गर्न उहाँहरू बाध्य हुनुहुन्छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १९, २०७४, ०३:५३:०७